dayniile » WAR_SAXAAFADEED ka soo baxay wasaarada Ambiga Qaranka
WAR_SAXAAFADEED ka soo baxay wasaarada Ambiga Qaranka
#WAR_SAXAAFADEED:- Marka hore HAMBALYO dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan, marka xiga ma jiraan haba yaraatee hub ku soo dhacay magalaada nooca uu doono ha ahaadee, dhinaca ma jirto cid wax ku noqotay degmooyinka Xamarweyne, Waaberi, Howlwadaag & Wadajir.
Ujeeddadu waxay aheyd in khalkhal lagu galiyo shacbiga Soomaaliyeed isla markaana loo adeegsaday BACYAAL MADOW waxyaabaha QARXA.
Sidaas darteed waxay ciidamadeenu gaareen goobihii ay wax ka dhaceen daqiiqo uun ka dib baaritaan ay sameeyeenna waxay ku soo heleen waxyaabihii loo adeegsaday.
Ugu dsmbeyntii waxaan qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ka codsaneynaa in ay la soo xiriiraan ciidamada u taagan sidii ay badbaadin lahaayeen nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadkii saarnaa ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Abdulaziz Ali Ibrahim Xildhiban, Xildhibanpublications.net
:- Marka hore HAMBALYO dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan, marka xiga ma jiraan haba yaraatee hub ku soo dhacay magalaada nooca uu doono ha ahaadee, dhinaca ma jirto cid wax ku noqotay degmooyinka Xamarweyne, Waaberi, Howlwadaag & Wadajir.